"Udibanisa" njani (ukubandakanya) Ukudibanisa ngesiFrentshi?
"Hlanganisa" Ezi ziVumelwano zakho zeVerb
Xa ufuna ukuthetha "ukubandakanya" ngesiFrentshi, sebenzisa isenzi kubandakanya . Ukufana kwesiNgesi kwenza kube lula ukukhumbula. Nangona kunjalo, kusadingeka ukuba idibaniswe ukuba ithathe iinguqulelo "ezifakiwe" okanye "ezibandakanya" kunye nezinye iifom zezenzi. Isifundo seFrench esisisiseko siya kuchaza indlela oku kwenziwa ngayo.
Ukudibanisa isenzi sesiFrentshi siquka
Ukuquka isenzi esingaqhelekanga , ngoko ayihambisani nesinye isenzo seendlela zokuqhelanisa izenzi.
Nangona kunjalo, akuyedwa. Isigqibo esifanayo esisetyenziswe apha singasetyenziselwa izenzi ezifanayo ezifana nokugqiba (ukugqiba) , ungabandakanyi (ukuba ungabandakanyi), kwaye ungasebenzi (ukuba ungene).
Njengazo zonke izenzo zokubambisana , qalisa ngokuchonga isenzi sesenzi. Kule meko, oku kuquka- . Ngokulandelayo, faka ukuphela okungapheliyo ngokugqibeleleyo ngokwemizwi yesigama kunye nexesha. Bahluke kwixesha ngalinye, elizayo, kunye nexesha eligqibeleleyo, ngoko kukho amagama angakumbi okuwakhumbula. Ngokomzekelo, " Ndiquka " ngu " jinclus " ngexesha "siza kubandakanya" ngu " us inclurons ."
zibandakanya ndakanya kubandakanywa
iquka kuquka ndakanya
ndakanya inclurons ndakanya
ndakanya ndakanya kuquka
ziquka incluront kubandakanywa
Inxaxheba yeNxaxheba yeNkcazo yoNyaka
Isetyenziswe njengesenzi, isichazi, isibizo, okanye i-gerund kuxhomekeke kumongo, inxaxheba ethatha inxaxheba yenziwa ngokungongeza - intsimbi kwisenzi isenzi.
Ukubandakanya, oku kubangela ukuba kufakwe .
Ngaphandle kokungapheleli, ungasebenzisa i- passé compé ukudala ixesha elidlulileyo "elifakwe" kwisiFrentshi. Ukwenza oku, qalisa nge-conjugate efanelekileyo ye- avoir ( uncedisayo, okanye "ukuncedisa," isenzi ) ukuhambelana nesigama sesigama.
Emva koko, qha ga mshelana . Ngokomzekelo, " ndidibanise " " ndibandakanye " kwaye "sifake" " sidibanise ."
Okulula ngakumbi kufaka ukudibanisa ukwazi
Ngokuhamba kwexesha, unokufumana nokusetyenziswa kwemibono embalwa elula yokubandakanya . Isimo sokuzithoba kwesenzo , umzekelo, sisetyenziswe xa isenzo sokubandakanya ngandlela-thile singaqinisekanga. Ngendlela efanayo, iimeko zesimo somlomo zithi ukubandakanya kuya kwenzeka kuphela ukuba kukho into enye.
Ixesha leencwadi zokubhala ezilula kunye nokuthobela ukungafezeki kubonakala ngokukodwa kubhalwe ngokusemthethweni. Ukuba ufunda ezininzi zesiFrentshi, oku kuya kuba kuhle ukwazi.
ndakanya kubandakanywa zibandakanya inclusse
ndakanya kubandakanywa zibandakanya zibandakanya
ndakanya kuquka iquka inclût
ndakanya kubandakanywa zibandakanya iziphumo
kuquka includingriez i-inclûtes inclussiez
ziquka kuquka kuquka ehambelanayo
Ifom yokwenza isicelo isona kuphela asifunanga isigama sesigama. Kungenxa yokuba isenzi sisichazela ukuba ngubani kule nkcazo emfutshane okanye izicelo. Kunokuba " udibanise, " yenze lula ukuba "kwi- inlcus ."
Iimpapasho zesiFrentshi ezineMida
I-Restrictive "kuphela" / "engekho kuphela" ngesiFrentshi
Ukuguqulelwa kunye nabadlali begama lesiJapane elithi "Atari"
Ndingayandisa njani iSigama sam?
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: I-Sperare
1968 I-Ford Mustang Ifoto yegalari
I-Kiraman Katibin: I-Muslim Recording Angels
Ukuhlangana Kwezilwanyana ePuerto Rico
Quotes zezingane ze-Halloween